Ngu uqobo, percarbonate sodium - lokhu acid, esetshenziswa noma ngabe eyedwa noma yengezwe Abenzi ukukhiqizwa yokuwasha. Ngokuvamile ezitholakala sodium percarbonate izimpushana. Lesi sihloko akhawunti ngempela enemininingwane zezikhathi esemqoka efana indlela yokwenza futhi usebenzisa izakhiwo ndaba, futhi kanjalo. Kona. Futhi manje zonke lezi zinto ukuze.
A inqubo ukulungiselela sodium percarbonate
Okokuqala kumelwe kuthiwe i-sodium percarbonate - umkhiqizo imvelo. Ngo nenqubo yokubola izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba ezinobuthi noma ezinye ingozi emhlabeni ngaphandle azisenzeki. Ngu imikhiqizo efana noqhekeko yilezi: amanzi, baking soda ne-oksijini. Leli qiniso elinye incazelo ukusetshenziswa aleli bleach ethile.
Ngo umkhakha, kunezindlela ezintathu ukuthola le chemical kukhona. Ngamunye wabo ngempela sina ihluke nomunye. Izindlela ezintathu ezilandelayo uzobe ngesineke njengoba kubekiwe ngangokunokwenzeka.
Indlela eyodwa - crystallization
Indlela yokuqala, okuyinto kabanzi umkhakha - kuyinto crystallization. Ukuze uqale kuthathwe isixazululo soda, okuyinto exutshwe i-hydrogen peroxide. At lokushisa mayelana 20 degrees Celsius kuyinto nokuxhumana of the izinto ezimbili. Ngokulandelayo, crystallization Kwenziwa usebenzisa stabilizers. Sodium percarbonate kuyinto encibilikayo kakhulu, ukuze likwazi ukuba usawoti uvela ingxube okuholela. Ukuze lokhu wanezela usawoti kanye izithasiselo ehlukahlukene kulo. Ukusebenzisa Centrifuge crystalline percarbonate uyashiywa ingxube bese omisiwe. Kuyaphawuleka ukuthi imfuyo kanjalo percarbonate sodium etholwe akubhekwa imfanelo enhle kakhulu ngenxa khona usawoti.
Indlela ezimbili - spray
Lapho percarbonate kuveza sishaye, ukusetshenziswa Centrifuges akudingekile. Kunalokho kwenzeka isixazululo omiswe equkethe i-hydrogen peroxide kanye baking soda. Inqubo yenzeka dryer spray. Imikhiqizo ye- mode zokukhiqiza futhi abe lokususa - kwabantu aphansi. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukususa omningi amanzi, okuholela enkulu amandla izindleko.
Indlela ezintathu - ezomile
Kule ndlela obusa ezomile ukuphendula ingxube. Ububi le ndlela kuyinto ukuthola eside ukusabela. Kuyadingeka ukwengeza stabilizers ekhethekile, t. K. Happens sodium percarbonate uhlanzekile inqubo.
Kungani izindlela ezinjalo ngokuyinhloko asetshenziswa? Abakhiqizi usebenzisa i-sodium percarbonate e powder yokuwasha. A yokuwasha kudingekile okuqukethwe okusezingeni eliphezulu le-oxygen asebenzayo kuwo. Ngenxa ezintathu lezi ngendlela nje ukuphatha ukuze uthole percarbonate nge high amazinga O2. Yingakho ukusetshenziswa kwalezi zindlela uyathandwa embonini.
Sodium percarbonate: ukusetshenziswa e insipho kanye nezinye imikhakha yempilo
Kunoma powder noma ezinye yokuwasha bleach ezidingekayo. Sodium percarbonate kuyigama eziyisisekelo. It ngempumelelo kususa ngisho amabala kunzima kakhulu futhi izingubo zibe mhlophe. Ngaphezu kwalokho, i-sodium percarbonate isetshenziswa njenge-ejenti ukuze magciwane. Anakho nethonya elihle umbala lendwangu ngomqondo wokuthi umbala izingubo, ngisho nangemva inqwaba nokugeza, qinani.
Futhi, percarbonate sodium ezazisetshenziselwa ukwenza amakha kwezinye indawo yasekhaya. Ngokwesibonelo, e ukudla wemboni efana esetshenziselwa magciwane ebusweni zokusebenza. Esikhathini chemical, akusona ezingabalulekile kangako. Abaningi namachibi ukusabela nje usebenzisa i-sodium percarbonate.
Isicelo efana ngefomu okumsulwa
Oxygen bleach sodium percarbonate ekhaya akugcini nje elisetshenziswa izimpushana, kodwa futhi ifomu okumsulwa. Ungakwazi ukuthenga ke ezitolo ezahlukene ekhaya.
Akufanele sibakhohlwe abantu ukuphepha uma uyisebenzisa. Percarbonate - nolaka chemical izidakamizwa. Ngakho akuvumelekile ukusebenza naye ngezandla. Kuphoqelekile ukusebenzisa amagilavu zenjoloba. Ngaphezu kwalokho, akunakwenzeka ukuthi imfuyo eseke wangena amehlo noma ngaphakathi emzimbeni.
Manje sidinga ukusho mayelana nokuthi isetshenziswa kanjani zonke le ndaba ukusetshenziswa ekhaya, uma uthenge njengoba injalo emsulwa.
Sebenzisa efana ngesikhathi kokugeza umshini wokuwasha. Uma udinga bleach e umshini wokuwasha kufanele wengeze ezimbili wezipuni percarbonate, uma kwenziwe i egeza abavamile, kwanele futhi omunye.
Ukuze ahlanze izitsha Umshini wokuwasha izitsha kudinga eyodwa kuphela isipuni yalolu ketshezi.
Uma egeza Kwenziwa sifakwe emanzini, khona-ke lapha kubalulekile ukusebenzisa ingxenye eyodwa isipuni lomcebo litre amanzi ngamunye. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi emva sifakwe emanzini kuyadingeka ukuze wandise izingubo nomshini wokuwasha, kodwa ngaphandle kokusebenzisa i-sodium percarbonate.
Kubalulekile ukwazi iphuzu elibaluleke kakhulu. Sodium percarbonate iqala isebenze lapho izinga lokushisa kwamanzi idlula degrees 50 Celsius. Umthelela engcono kwenzeka uma izinga lokushisa kwamanzi kuyinto-90 degrees Celsius. Plus le-bleach kuyinto uhlambulule ephelele. izingubo gona kusukela percarbonate can ngisho ngesandla. A esiningi ngeke bathathe.
Obusa isitoreji percarbonate ekhaya
I elikhulu isitoreji lokushisa we ketshezi - kuze kube degrees 30 Celsius. Ibhokisi ne percarbonate ukuba agcinwe endaweni kahle futhi uvikeleke kusuka endaweni singakutholi ukukhanya kwelanga. Uma imfuyo ku isitokwe, kuleli gumbi kufanele umoya. Elinye iphuzu elibalulekile - ukungabi khona eduze izinto ezingase zibambe umlilo. Ngaphezu kwalokho, akuvunyelwe ukugcina percarbonate sodium obuseduze acid ehlukahlukene noma amadamu ngoba ketshezi.
Bleach kabanzi abantu abaningi. On izinkundla eziningi ungathola uphinde ufunde izibuyekezo we percarbonate sodium. Ezimweni eziningi, zingabantu esihle. Abaningi banelisekile ukuthi bleach eye yabasiza ukuba bakwazi ukuqeda amabala nenkani.
Enye plus ukuthi akhonjwe abathengi - wukuthi percarbonate akusho konakalisa umbala izingubo. Abakwazi wageza, hhayi kuphela izinto ezimhlophe, kodwa futhi umbala, okwenza kube isithako ukwahlukahlukana. Ngaphezu kwalokho, percarbonate ngeke kuyilimaze lendwangu akababhubhisi ke, ngisho nangemva inqwaba izona. Abasebenzisi abaningi batusa kakhulu ukuthi bleach kanye nabanye abantu.
Mop Floor - khetha imodeli kwesokudla.
Pipidastry - ibhulashi ukususa uthuli. Futhi ucabangani?
Namaphesi ngezandla zabo, noma isipho kusukela Empeleni akulona baxoshwa